घरको भान्सामा साङला लागेर हैरान हुनुभएको छ ? कुनै औषधीको प्रयोग नगरी, भान्सामा पाइने यी सामग्री देखी साङला,मच्छर,मुसा बाट भर्खरै पाउनुहोस् छुटकारा – Jagaran Nepal
मुसा , झिंगा , उडुस आदिको कारणले गर्दा चिन्तित हुनुहुन्छ भने आज हामी तपाइंलाई यसबाट छुटकारा पाउने घरेलु उपायको बारेमा जानकारी दिन्छौं । यो तरिका निकै नै सजिलो छ :-
शरीरको कुनै पनि भागमा माउसुली(भित्ती) खस्दा के हुन्छ ? यस्तो छ शास्त्रको शुभ–अशुभको संकेत
धर्तीमा रहेका सानाभन्दा सानादेखि ठूला जीवहरुको आ–आफ्नै महत्व हुन्छ, जस्तै, माउसुली । हेर्दा डरलाग्दो वा घिनलाग्दो लाग्ने माउसुली कसैलाई मनपर्दैन । तर, जुन माउसुलीबाट टाढा भागिरहेका हुन्छौँ, त्यसले हाम्रो भविष्यको संकेत गर्ने बताइन्छ ।
शास्त्रअनुसार घरको भित्तामा हिड्ने माउसुली(भित्ती) शरीरको कुनै पनि भागमा झर्नुले शुभ–अशुभको संकेत गर्छ ।
– यदि माउसुली टाउँकोमा परेमा सम्पति मिल्ने संभावना हुन्छ । त्यस्तै, गर्दनमा परेमा यश प्राप्त हुन्छ ।
– दाहिने कानमा परेमा आभुषण प्राप्त हुन्छ । बाँया कानमा माउसुली परेमा आयु बढ्ने संकेत गर्छ । यस्तै, बाँया गालामा झरेमा पुरानो मित्रसँग भेट हुने तथा दाहिने गालामा परेमा पनि आयु बढ्ने संकेत हो ।
– यदि माउसुली तपाईको नाकमा झरेमा तपाईको भाग्यदोयको संकेत मानिएको छ ।
– यदि पिठ्युमा माउसुली झरेमा घरमा कलहको संकेत मानिन्छ । पिठ्युको दोहिने भागमा खसेमा सुख र देब्रेमा परेमा रोगको संकेत गर्छ ।
– दाहिने काँधमा झरेमा विजयको संकेत गर्छ, तर बाँया काँधमा माउसुली खसेमा नयाँ सत्रु बन्ने संकेत हुन्छ ।
– यदि दायाँ हातमा झरेमा कपडा र बायाँ हातमा झरेमा धनको हानीको संकेत भनिएको छ । यस्तै, दायाँ खुट्टामा परेमा यात्राको लाभ र बायाँ खुट्टा परेमा घरमा कलह तथा बिरामी, दुःख मिल्ने संकेत मानिएको छ ।
तर सावधान हुनुस्, शास्त्रमा भनेको सबै सत्य हुन्छन् भन्ने छैन। माउसुली मुखमा खस्यो, वा खानामा पर्यो भने त्यसले शुभ पटक्कै गर्दैन। माउसुली विषालु हुन्छ त्यसैले यसबाट बच्नुनै बुद्धीमानी हुन्छ।